स्पेनको सब भन्दा सुन्दर सहर अल्बारासिन | यात्रा समाचार
स्पेनको सब भन्दा सुन्दर सहर अल्बारासिन
टेरुएल प्रान्त स्पेन खाली गरिएको ती क्षेत्रहरू मध्ये एक हो। पर्यटनको लागि व्यावहारिक रूपमा अज्ञात स्थान जुन अझै पनि थाहा पाउन लायकको लागि सही रत्नहरू राख्छ। यहाँ हामी मुडेजर कला को एक राम्रो उदाहरण संसारमा पाउन सक्छौं, जसले यसलाई यूनेस्कोले विश्व सम्पदाको रूपमा मान्यता प्रदान गर्न कमाएको छ। यो डायनासोरको केन्द्र पनि हो किनकि हालैका वर्षहरूमा प्रान्तमा यी प्रागैतिहासिक सरीसृपका १० प्रजातिहरू भेटिएका छन् र ती पर्याप्त नभएजस्तै टेरुएलमा स्पेनिश टस्कनी भनिन्छ, विशेष गरी मटारारिया क्षेत्रमा।
यसको सबैभन्दा उत्तम संरक्षित भण्डारमध्ये एक अल्बारासिन हो, जुन मध्यकालीन युनिभर्सल पर्वतमा अवस्थित छ जुन स्पेनमा सबैभन्दा सुन्दर शहर मानिन्छ। तपाईं किन जान्न चाहनुहुन्छ? पढिरहनुहोस्!
1 Albarracín कहाँ छ?
2 कसरी अल्बरराकन पुग्ने?
3 Albarracín को उत्पत्ति
4 Albarracín मा के हेर्ने?
5 अल्काजार र एन्डोडर टावर
6 Albarracín को सडकहरु
7 एल साल्भाडोरको क्याथेड्रल
8 एपिस्कोपल दरबार
9 सान्ता मारियाको चर्च
10 अल्बरराकनको पर्खालहरूको लागि मार्ग
Albarracín कहाँ छ?
अल्बाराक्रिन isthmus र प्रायद्वीपमा अवस्थित छ जुन Guadalaviar नदी गठन गर्दछ। यो एक गहिरो गासले घेरिएको छ जुन एक डिफेन्सिंग मोइटको रूपमा कार्य गर्दछ, भित्ते बेलुका द्वारा पूरक हो जुन एन्डाडोरको महलमा अन्त्य हुन्छ। यसको स्थान १,१1182२ मिटर उचाईमा र यसको मौसमले विशेष गरी हिमालमा बाइकि especially वा पर्वतारोहण जस्ता बाह्य गतिविधिहरूमा केन्द्रित गतिविधिहरूको विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ। थप रूपमा, वरपरका क्षेत्रहरूमा त्यहाँ मुख्य सडकबाट केहि मिनेटमै गुफा चित्रहरू छन्।
कसरी अल्बरराकन पुग्ने?
यो अर्गोनी शहर राजधानीबाट केवल आधा घण्टा टेरुएलबाट 35 XNUMX किलोमिटर टाढा अवस्थित छ। यद्यपि बसबाट जाने सम्भावना छ, कार शहर र यस वरपरको ठाउँ स्वतन्त्र रूपमा अन्वेषण गर्ने उत्तम तरिका हो।
Albarracín को उत्पत्ति
यसको उत्पत्तिबाट एल्बार्राकनलाई यसको स्थान द्वारा चिह्नित गरिएको छ, रक्षात्मक स्थानको रूपमा यसको क्षमता निर्णायक छ। यो सान्ता मारियाको पूर्व-रोमान्सिक चर्च वरिपरिको सानो गाउँको रूपमा जन्मेको थियो। सन् १ 965 ADXNUMX को आसपासमा पहिलो बचावको घेरा मुस्लिम कब्जाको बखत विकसित गरिएको थियो जसमा सान्ता मारिया र अल्जारको चर्च पनि थियो।
Albarracín मा के हेर्ने?
अल्काजार र एन्डोडर टावर
ग्वाडालावीर नदीको अधीनमा पर्ने जनसंख्याको एक छेउमा अवस्थित गढीको वर्तमान समयमा पर्खाल र धरहराको तहखानेहरू मात्र बचाइएको छ। माथिल्लो तलामा आँगन वरपरको मुख्य निवास थियो, जहाँ मुनिको ठूलो इनार अवस्थित छ।
अन्डाडोर टावर जुन सुरुमा अल्बेराना धरहरा थियो, १० औं शताब्दीको अन्त्यबाट पनि सुरु भयो र ११ औं शताब्दीको सुरूमा यो सहरलाई सामेल गरिएको थियो, जब यो शहर बानो द्वारा शासित टाईफाको राजधानी बन्यो। बर्बर मूलको रजिन। सान्ता मारिया चर्चको छेउमा अवस्थित व्हाइट टावर १ XNUMX औं शताब्दीको हो। यसको साथ शहरको रक्षात्मक प्रणाली पूरा भयो।
यसको प्रतिरक्षाात्मक महत्त्व १ XNUMX औं शताब्दीमा हरायो, जब फिलिप ले अरागोनको फ्युरोहरू खारेज गरे र किल्लालाई भत्काउने आदेश दिए, यद्यपि एन्डोडर वा डोआ ब्लान्का टावरहरू नभई मूल किल्लाहरू।
२० औं शताब्दीको अन्तिम दशकहरूमा पश्चिम र दक्षिण पर्खालहरू पुनःप्राप्ति गर्न पुनःस्थापना कार्यहरू गरियो र सन् २००० सम्ममा यो परिसरलाई सांस्कृतिक चासोको सम्पत्ति घोषणा गरियो।
Albarracín को सडकहरु
तर अल्बाराकनको आकर्षण यस सडकको लेआउटमा सबै भन्दा माथि छ भूभागको कठिन स्थलाकृतिमा अनुकूल गरिएको, सीढी र बाटोहरूसँगै। प्रत्येक कुना, प्रत्येक घर यसको ढोका र दस्तकहरूको लागि प्रशंसाको वस्तु हो, फीता पर्दासहित यसको सानो झ्यालहरू, समृद्ध गलेको फलाम र खोपिएको काठमा यसको लगातार बालकनीहरू ... अलबाराकनको मुख्य स्मारक शहर नै हो, यसको सबै लोकप्रियहरू सहित स्वाद र कुलीन, यसको इतिहास र यसको मान्छे को राम्रो प्रतिबिम्ब।
यद्यपि, राज्यिय हवेलीहरू र लोकप्रिय वास्तुकलाहरू बीच हामी हाइलाइट गर्न सक्छौं: जुलिनेटा घर, Azagra सडकमा घर, सामुदायिक वर्ग र सानो र उत्तेजक प्लाजा मेयर।
अब चर्च अफ सान्ता मारिया, क्याथेड्रल, एपिस्कोपल दरबार जस्ता भवनहरू विशेष उल्लेखको योग्य छन्।
एल साल्भाडोरको क्याथेड्रल
छवि | सान्ता मारिया डे अल्बारासिन फाउन्डेसन
एल साल्भाडोरको क्याथेड्रल १ 1572२ र १1600०० को बीचमा बनेको थियो, रोमनस्क र मुडेजर शैलीको अघिल्लो मन्दिरमा। हामी लेट गोथिक परम्पराको पोलिक्रोम रिब्ड वाल्टले कभर एकल नाभको साथ नयाँ पुनर्जागरण निर्माणको सामना गर्दैछौं। यसमा बट्रेस र खुट्टामा गायकहरूको बीचमा चपलहरू छन्।
यसलाई बारोक पाइलास्टरहरू र कर्निकेसले समर्थन गर्दछ जुन रेडिकेसोरेशनको हिस्सा हो जुन यस क्याथेड्रलमा १ XNUMX औं शताब्दीको शुरुमा बनेको थियो, गोथिकको उपस्थिति बारोकमा परिवर्तन गर्‍यो। १ th औं शताब्दीमा भित्री भाग खैरो रंगमा रंगिएको थियो र २१ औं शताब्दीको सुरूमा मन्दिरको पुनर्स्थापनासँगै यो चित्रकला १ the औं शताब्दीको मूल रंगमा फर्काउन हटाइएको छ।
एल साल्भाडोरको क्याथेड्रलमा एक क्लस्टर छ जसको माध्यमबाट तपाईं यसको छेउमा रहेको एपिस्कोपल दरबार पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। आज यस भवनमा डायोसेसन म्यूजियम छ, जसमा टेपेस्ट्री र सुनारको महत्त्वपूर्ण संग्रह छ।
एल्बारासिनको डियोसेसन म्यूजियम १ XNUMX औं शताब्दीको भवन, इपिस्कोपल दरबारको महान तलामा अवस्थित छ। यो सान्ता मारिया डे अल्बारासिन फाउन्डेसन, द्वारा बोलाइएको एउटा भ्रमण भित्र भ्रमण गर्न सकिन्छ Albarracín रिक्त स्थान र खजाना, जो संग्रहालयको प्रबन्ध एक हो।
यसको विशाल संग्रहमा हामी क्याथेड्रल खजानाबाट सुनारका टुक्राहरू र ब्रसेल्सको ज्युबल्स वर्कशपमा बनाइएको फ्लेमिश टेपेस्ट्रीहरू हाइलाइट गर्न सक्दछौं, जसले गिदोनको कथा प्रस्तुत गर्दछन्।
यद्यपि तपाई महलको कोठाहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मेयोर्डोमिया कोठा, बिशपको आधिकारिक कोठा र उसको निजी कोठा जहाँ अफिस १ th औं शताब्दीका पर्खालका चित्रले सजाइएको थियो। अन्य कोठाहरूले संगीत वाद्ययन्त्रहरू देखाउँछन् जुनसँगै क्याथेड्रलको समारोहहरू थिए, कोरल पुस्तकहरू, गोथिक तालिका र केही फर्नीचर।
यो सहरको बाहिरी भागमा अवस्थित छ जुन कुनै समय जनसंख्याको केन्द्रक थियो। मूल मन्दिर भिजिगोथिक चर्च थियो जुन शहरको प्रतिरक्षा प्रणालीको एक हिस्सा थियो, जसको मतलब भनेको पर्खालहरूको, तर १ XNUMX औं शताब्दीमा भएको एउटा आगलागीले गम्भीर क्षति पुर्‍यायो, त्यसैले हालको १ XNUMX औं शताब्दीको चर्चले एक सिपाहीको नाभिको पट्टि राखिएको घर राख्यो। १ XNUMX औं शताब्दीमा सान्ता मारियाको चर्च डोमिनिकन कन्भेन्टको चर्च थियो, जुन अहिले हराइसक्यो।
यसको बाहिरी भाग मुडेजर शैलीमा छ, जुन यसको आन्तरिक ठाउँमा सराहना गरिएको छैन जहाँ चर्च र अल्बारासिनको समुदायले दिने प्लास्टरको उच्च राहतको सजावट बाहिर देखिन्छ। यसको धेरै महत्वका वेदीपिकहरू छन्, जबकि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण १ altar औं शताब्दीको मुख्य वेदीको हो।
अल्बरराकनको पर्खालहरूको लागि मार्ग
यसको वरिपरि पर्खालहरू नभएको र नगरपालिकाको ऐतिहासिक-स्मारक परिसरको अंश हो भनेर अलबाराकनको भ्रमण पूर्ण हुँदैन। त्यहाँ पुग्न तीन तरिकाहरू छन्: चोर्रो सडकबाट, स्यान्टियागो चर्चबाट टोरेससम्म गएको र मोलिना पोर्टलबाट। भ्रमणको क्रममा तपाईंले केहि राम्रो ढलानहरू चढ्नुपर्नेछ, त्यसैले आरामदायक जुत्ता र केही पानी लगाउन सुझाव दिइन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » गेटवे » स्पेनको सब भन्दा सुन्दर सहर अल्बारासिन